Namuhla, iningi labantu linesizotha, ezinye ziyabona, kanti abanye abazi. Ukuzihlonipha komunye umuntu kuncike kancane, kanti abanye abantu, ngenxa yokuziqhenya, bahlangabezana nokucindezeleka okujulile. Kunoma yikuphi, ukuzethemba okuphansi kuphazamisa ukuphila komuntu, kugcina iminyango eminingi namathuba ngaphambi komuntu.
Ngenxa yalokho okukhona okungekho ngaphansi kwakho?
Izazi zengqondo zithanda ukusho ukuthi ukuhlolwa okuphansi kwakho manje kungumphumela wemfundo engafanele yengane ebuntwaneni. Phela, izinkinga eziningi okwamanje zihlobene eduze nezenzakalo ezedlule. Mhlawumbe, ukuzethemba okungenakuqhathaniswa kuhlotshaniswa neqiniso lokuthi abazali bezibilini zabo abazali badumisa ingane encane, nakakhulu, babizwa futhi bavame ukugxeka. Ngokuvamile, ubaba noma umama angakwazi ukuveza okungezansi noma ukuthukuthela ingane. Ngenxa yalokho, ingane ikhulisa ukwesaba, izingelwa futhi ikhule ngokuntuleka kokuzethemba. Ukuze ungaziphindaphindi abazali abaphutha, kufanele kukhunjulwe ngaso sonke isikhathi ukuthi noma yimuphi umuntu udinga ukuzihlonipha yena, noma ngabe uyindodana noma indodakazi yakho encane. Dumisani ingane, yikhule esimweni sokufudumala, isisa nokuthandana, ngisho noma unenkinga ethile yokuphila. Ngikholelwa, esikhathini esizayo umntwana uzokubonga kuphela.
Esinye isizathu sokuzithoba singahle singabi ngabazali, kepha ithonya lomphakathi. Futhi, isizathu sokuzibona ngaleyo ndlela singase sibonakale encwadini, kodwa hhayi ngokujulile, kodwa ngesikhathi sokukhula. Ngokuvamile intsha izama ukuziveza ngezindlela ezihlukahlukene, ukubonisa "I" yabo. Kodwa, njengomthetho, ngemuva kokubonakaliswa okusobala kobuntu bakhe akusekho psihika okwakhiwa ngokugcwele, okuyinto elamukela kakhulu umbono wabanye. Kulula kakhulu intombazane noma insizwa "ehluke" kontanga yabo, ingase ibe ngaphansi kokugxeka nokuhlekwa yontanga. Amahlaya ama-brutal ofunda nabo esikoleni, ukuhlekwa usulu ... I-psyche yengane engaqiniseki ingakwazi "ukuphuka" ekuhlaselweni okunjalo kobudlova yontanga futhi ngenxa yalokho, intombazane izoba nezinkimbinkimbi eziningi nokungaqiniseki.
Futhi, njenge-nistranno, kodwa isizathu sokungabi nombono omuhle kakhulu ngawe ungaba yizinto ezicabangelayo, isifiso sokuthi awufani nakho konke onokuthile okungalungile kuwo wonke umuntu. Ngokwesibonelo, njengoba kuyaziwa, isigamu esihle sabantu sinobuhlungu kakhulu ukubukeka nokulingana. Owesifazane angaqiniseka ukuthi imilenze yakhe embi ayifani. Uzohlale ehambelana nabanye abameleli bobulili bakhe, kanye namamodeli esembozo somagazini, kanye nama-actress kuma-skrini e-TV. Njengomthetho, kulula ukuba umuntu abone izinzuzo kumuntu, kodwa kuye, kunamaphutha kuphela. Akunakwenzeka ngaso sonke isikhathi ukuthinta ukubonakala noma isibalo, othile angacabanga ukuthi akahlakaniphile ngokwanele, angaxhumani, hhayi umuntu othakazelisayo. Ekhanda, kuyohlale kube nemicabango yokuthi omunye ujabule, uyaneliseka futhi uhlakaniphile.
Yini okufanele ngiyenze ukuze ngilahle ukuzethemba okuphansi?
Okokuqala, udinga ukuzithandayo. Yebo, yebo. Cishe, usuzwile izikhathi eziningi kakade noma usususa kwenye incwadi ethandwayo ngumuntu owaziwayo ngengqondo. Kulula ukusho ukuthi: "Zithande wena", uzothi, uma ususebenzise konke okushiwo umqondo wokuthi unesifuba esincane, ulalele izindlebe noma umuzwa onganele. Kodwa eqinisweni, iqiniso liyakuthanda futhi lamukele, ngendlela oyikho. Yebo, okokuqala kuyoba nzima ukungena. Kodwa njengoba bethi, ngaphandle kobunzima awuyikukhipha inhlanzi kanye nedamu. Kuthatha isikhathi sokusebenza njalo kuwe, ukukholwa kuwe futhi kuzobe sekufanayo! Kubaluleke kakhulu ukuthi ngalesi sikhathi, hhayi nje kuphela, uthandwa futhi uthandwa ngabantu. Kumele siqaphele ukuthi njengoba kungekho izimbali ezimbili ezifanayo ngokuphelele, azikho neze abantu abafanayo. Kubalulekile ukuzama ukuthanda ukwehluleka kwakho futhi ungenzi nje kuphela ukufaneleka kwabo, kodwa ube yinto yabo ekhethekile, isici esihlukile.
Zama nsuku zonke ukuze uzibonge, ukuzidumisa. Yiqiniso, ngokushesha ngeke ukwazi ukusebenza, ngoba uphile iminyaka eminingi, uzicindezela. Futhi uphinda uphinde uphakamise zonke izinsuku, zama ukuzwa impendulo enhle ngawe evela kwabanye abantu. Futhi ngolunye usuku, ngelinye ilanga, lapho umzimba wakho uqala ukubona ukuthi udumise kakhulu, futhi ngokuhamba kwesikhathi wena ngokwakho uzoqala ukukholelwa ukuthi uhlukile futhi awunakwenzeka. Kuyaziwa yonke indawo ukuthi uma umuntu etshelwe izikhathi eziyikhulu ukuthi ingulube, khona-ke usekukhoneni. Futhi kungani singeke siqale ukuzama ukuzwakalisa ukuncoma, ukuzidumisa thina?
Ungalokothi ume ukuzitshela wena! Ungalokothi. Ngisho noma empeleni wenze iphutha - kulungile, vele uzitshele ukuthi esikhathini esizayo uma unakho konke kuzokwenzeka ngempela!
Buka ukuthi ubukeka kanjani: ngokuqinisekile unezinhlanzi ezinamahlombe futhi ikhanda liyancipha. Kumelwe kuthiwa lokhu kuyisici sabantu bonke abanesizotha esincane. Qondanisa amahlombe akho, phakamisa ikhanda lakho uphinde uphakamise phambili - ngokuya esikhathini esizayo, esilula.
Ngeshwa, emphakathini wakho kungenzeka kube khona "ohlakaniphile" ongakwazi ukukugxeka njalo, ukuhleka usulu phezu kwakho noma, njengoba kunendlela elula ukuthi namuhla, "i-troll". Yiqiniso, kufanelekile ukunaka ukuhlambalaza kwe-nadovoy, amahlaya anele kanye nokwehliswa ngomusa. Kodwa uma umuntu ewela umugqa, akudingeki ubekezele. Ngitshele ngokuqondile ukuthi awuthandi futhi ekugcineni, uyeka ukukhuluma nomuntu. Kunalokho, yena ngokwakhe unezinkimbinkimbi ezanele.
Chaza ngokucacile lokho ongakuthandi wena. Wena, Yebo, ungayiphendula lokho kukho konke. Kodwa udinga ukubukeka ngempela izinto. Uma kwenziwa, akukho okukuvimbela ukuthi ulahlekelwe amakhilogremu angaphezulu. Iya kudokotela, thola imbangela yesisindo sakho esiningi. Zisebenze ngokwakho. Akekho ongazilamba yena noma ukudla okulambile. Ungadla konke, kuphela ngokulinganisela. Ngaphezu kokudla okunempilo, ukuvivinya umzimba kuzokwenza ngcono imiphumela yakho kuphela. Futhi-ke, ungakhohlwa ukuzidumisa ngomsebenzi owenziwe. Futhi ukhumbule ukuthi uzithanda wena ngendlela oyiyo. Emva kwezinyanga ezimbalwa uzobona umphumela.
Uma unesikhalazo mayelana nokubukeka kwakho, lokhu akusho ukuthi awukwazi ukwenza ngaphandle kosizo lwe-operesheni yepulasitiki. Usuvele uhle, kodwa awukwazi ngakho okwamanje. Futhi ungakholelwa kuwe. Ungakhohlwa ukuzibheka, ngoba ngisho nezinwele ezihlanzekile kahle nezikhumba ezibukhali ebusweni zingakhuthaza ukuzithemba okuthile, futhi ezindabeni zokwandisa ukuzethemba, azikho izinyathelo ezizwakalayo.
Futhi, njalo ube nomoya omuhle, uzitholele isikhathi sokuthanda intandokazi, ufunde izincwadi, uhambe kaningi emoyeni omusha, uxoxe nabantu abathandekayo kuphela, udle kahle, ucabange kahle futhi uzikhiphe zonke izinto ezinhle kakhulu futhi ezimangalisayo! Funda ukujabula ekuphileni, funda ukuzithanda wena! Kuzo zonke zizovela!
Ngithanda kokubili okufanele ngikhethe, angazi
Iyini yobudala beBalzacian wesifazane
Indlela yokuvumelanisa nesoka lakho othandekayo
Uma indoda ingowesifazane, njengomntwana
Kungani indoda ikhohlisa intombi yakhe ethandekayo
Indlela yokunqoba owesifazane ophumelelayo?
Ukunakekelwa kwezinyawo: izithende ezithambile
Usuku lokuzalwa lukaMaxim Galkin nesithombe esisha sika-Alla Pugacheva
I-Psychology yobuhlobo bomndeni: umhawu
Abalingisi abayishumi abaphezulu bakhokhelwa eHollywood
Izinkolelo mayelana nokuzibamba kwesifazane
I-Chocolate-Butter Cream yamaqebelengwane
Indlela yokunaka ingane, uma usebenza?
Iseluleko esihle nezindlela zokugubha uNyaka Omusha!
Wedding of Navka and Peskov: izithombe best kanye imininingwane emangalisa
Gardenia jasmine: ukunakekela, ukulima
Izinhlobo ezahlukene zetiyi nezakhiwo zabo eziwusizo
Ukutheleleka Emathunjini Emntwaneni Wezingane Ezinsana
Iyini i-nitrate futhi bayidla ini?
Ingaphakathi lendlu lonyaka omusha